Ingabe abacebile kuphela abazokwazi ukukhokhela amaholide esikhathini esizayo?
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Ingabe abacebile kuphela abazokwazi ukukhokhela amaholide esikhathini esizayo?
Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • emihlanganweni • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ezokuvakasha • Transportation • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba ze-UK Breaking
Ochwepheshe abangaba ngu-1000 abavela emhlabeni wonke babuzwa ngomthelela wokunyuka kwamanani okulindeleke kabanzi ngenxa yalolu bhubhane emakethe iyonke.
Ochwepheshe bemboni bacishe bahlukana ngokulinganayo ngokuthi abacebile kuphela abazokwazi ukukhokhela amaholide esikhathini esizayo, kuveza ucwaningo olukhishwe namuhla (ngoMsombuluko 1 Novemba) yi-WTM London, umcimbi ohamba phambili emhlabeni wonke wemboni yezokuvakasha.
Ochwepheshe abangaba ngu-1000 abavela emhlabeni wonke babuzwa ngomthelela wokunyuka kwamanani okulindeleke kabanzi ngenxa yalolu bhubhane emakethe iyonke. Bangaphezudlwana kwengxenye (51%) abakhathazekile ngokuthi uhambo luzoba yizicebi, kanti u-49% ungavumi.
Umbiko Wezimboni ze-WTM ubuye wabuza mayelana nesilinganiso sokunyuka, nomphumela wensalela oqinisekisa ukuthi amanani azokhuphuka ngo-2022. Abangaphezu kweyodwa kwabathathu (35%) besampula bathi amanani angase enyuke phakathi kuka-1% no-20% uma kuqhathaniswa nonyaka wamanje. Kodwa-ke, izingcindezi zezindleko ezinkulu kanye nesidingo sokubuyisa imali elahlekile ngesikhathi sodlame sisho ukuthi abangaphezu koyedwa kwabayishumi (12%) balindele ukukhushulwa kwamanani entengo ngaphezu kwama-20%.
Ngakolunye uhlangothi, abanye balindele ukuthi amanani ehle ngo-15% abikezele ukwehla okuphakathi kuka-1% no-20%, kuyilapho u-9% uthe amanani enkampani yabo azokwehla kakhulu, ngaphezu kuka-20%.
Cishe ingxenye eyodwa kwezinhlanu (22%) ilindele amanani ukuthi afane.
Abathengi base-UK futhi bayazi ukuthi umthelela okabili we-COVID-19 kanye ne-Brexit ezintengoni unamandla okuba nomthelela ekuthengeni kokuhamba, kanti u-70% uyavuma ukuthi lokhu kukhathaza ikusasa.
USimon Press, i-WTM London, uMqondisi Wemibukiso, uthe: “E-UK, izindleko eziphelele zokuhambela phesheya kwezilwandle ehlobo zaphazamiseka ngokukhokhela ukuhlolwa, kanti isidingo sezindawo zokuhlala siholele ekushodeni nokukhuphuka kwamanani. Lezi zingcindezi ezithile zingase zisebenze noma zingasebenzi ngonyaka ozayo, kodwa imiphumela evela embonini ayinakuphikiswa - amanani azokhuphuka ngo-2022.
“Imikhakha eminingi kwezokuvakasha ibiyisa imiyalezo yabathengi yayo 'kunani' kunokuthi 'izindleko'. Inselelo yemboni iwukuqinisekisa ukuthi ingakwazi ukuhlinzeka ngomkhiqizo nolwazi oluvumela ukukhuphuka kwentengo kubahambi futhi abagcina ama-margins abo, kodwa ngaphandle kokuzikhipha emakethe.